Giddu gala qorannoo imaammataati: Waan Tigree ta’aniif qofa haloo bahuuf aangoo irraa ari’e Dr. Abiy jedhanii amma booyaa jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGiddu gala qorannoo imaammataati: Waan Tigree ta’aniif qofa haloo bahuuf aangoo irraa ari’e Dr. Abiy jedhanii amma booyaa jiru.
Waan Tigree ta’aniif qofa haloo bahuuf aangoo irraa ari’e Dr. Abiy jedhanii amma booyaa jiru. Jaruma kanaa mitii warri duugda duuba taa’ee biyya bulchu jedhamaa ture? Jara hafanis oduu isaanii eegaatuma jirra. Walfaana gurra nu buusu jennee abdanna
Akka natti fakkaatutti, Wayyaanee aangoo irraa mulqanii garuu akka jiraachuu danda’an abdii itti horuu barbaadu. Kunis akka aangoo gadi dhiisuuf jarri hin rakkanneef natti fakkaata. Fkf, nama qawwee harkaa qabu tokko “koottu si ajjeefnaa hiikkadhu” yoo jetteen, hin hiikkatu ajjeesee du’a malee.
Jara keessaa tokko aangoo irraa buusanii seeratti yoo dhiheessan, inni itti aanu humna qabuun of dandamachiisuuf waan danda’u godhuu mala. Kana jechuun jiraachuuf aangoo san qabaachuu qaba jedhee yaadnaan aangoo san irratti du’a. Jiruuf wabiin isaa aangoo ta’a. Garuu inni ari’ame nagayaan jiraachuu isaa yoo mirkaneeffate, inni itti aanu aangoo gadi lakkisuuf hin dhiphatu; jiraachuu danda’a jedhee waan yaaduuf. Inumaayyuu rakkoo siyaasaa tana keessaa bahee kan kana boodaa natti haa hafuu waan qabu nyaachuu naa wayya jedhee yaaduunis ni mala. Kuni akka aangoo gadi dhiisan salphisaaf jechuudha.
Dhawaataan jara aangoo harkaa baasanii gara jiruu dhuunfaatti akka deebi’an gochuuf tooftaa salphaa ta’uu mala. Waan amma dura saaman nyaatan malee kana booda saamuuf karaan itti cufama. Saamuuf caasaatti fayyadamuun ni hafa; aangoo waan hin qabneef. Kotorbaandii dalaguuf lubbuu namaatti taphachuun hin mijaa’uuf san booda. Haala saniin qulqulleessuun irra salphaa ta’uu mala. Yoo akkas tahuu baatee seeratti kan dhiheessan tahe, jarris of dandamachiisuuf fincila kaasu.
Fincila isaanii san humnaan itti deemanii irra aanuu wayya moo tooftaa araara fakkaatuun qulqulleessuu wayya jettanii yaadduu?
Kanaaf ta’innaa laata kan hanga ammaa ari’uu malee seeratti hin dhiheessineef? Yoo akkana tahe adeemsi isaa sirriidha jettanii yaadduu?
Hogganoti wayyaanee sooramaan boqatan
1. Jeneraala Daayireektara Olaanaa Inistituyutii Qorannoo Tarsiimoo Qunnamtii Alaa kan ta’an obbo Sibahaat Naggaa,
2. Giddu Gala Qorannoo imaammataati Dooktar Kaasuu Ilaalaa,
3. Piroojektii Imaammata Karoorafi Ittiffayyadama Lafaa Qindaa’aa irraa obbo Ballaxaa Tafarraa,
4. Hordoffii Raawwii Karoora Imaammata Daldalaa fi Industirii irraa obbo Taaddasaa Hayilee akkasumas
5. Giddu Gala Qorannoo Imaammataati obbo Makoonniin Maaniyaazawaal yoo ta’an, gara fuula duraattis hojiin wal fakkaatu itti fufa jedhameera.